Intel CPU i-Series တွေရဲ့ အက္ခရာတွေအကြောင်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer Knowledge Knowledge Tech News Intel CPU i-Series တွေရဲ့ အက္ခရာတွေအကြောင်း
Maung Pauk at 11:38:00 PM Computer Knowledge, Knowledge, Tech News,
Intel CPU i-Series
ကွန်ပျူတာဝယ်တဲ့အခါ အဓိက ကြည့်ကြတာက CPU, RAM, Graphic နဲ့ Storage ပါပဲ.. ကျွန်တော်တို့ ခုလက်ရှိအသုံးများနေတာက Desktop PC မှာရော Laptop မှာပါ Intel ရဲ့ CPU တွေပါ.. အဲဒီထဲက i-Series တွေဟာ အသုံးအများဆုံးပါပဲ.. ကွန်ပျူတာ CPU ကိုသာကြည့်ကြတာ CPU တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတော့ တော်တော်များများ မသိကြပါဘူး.. CPU တွေထဲက Intel ရဲ့ i-Series CPU တွေမှာပါတဲ့ အက္ခရာအကြောင်း ဖတ်မိသလောက် ပြန်လည် မျှဝေပါမယ်..
Desktop CPU ကတွက်ကတော့ အထွေအထူး မရှိပါဘူး။ K ပါတာနဲ့ မပါတာ ဒီ ၂ နှစ်ခုဘဲ ရှိပါမယ်။ ရိုးရိုးက official default core clock နဲ့ K ပါရင်တော့ unlock core clock ပေ့ါ။ ဥပမာ Intel® Core™ i7-8700 Processor ဒါဆိုရင် i7 ပေ့ါ ၊ 8700 လို့ ရေးထားတဲ့အတွက် generation က 8th gen ပေ့ါ။ ဒီကောင်မှာဆိုရင် Processor Base Frequency က 3.20 GHz ကနေစပြီးတော့ Max Turbo Frequency
ကတော့ 4.60 GHz အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ( Max လို့ရေး ထားပေမယ့်လည်း Unlock မဟုတ်တဲ့အတွက် အပြည့်အ၀ သုံးနိုင်မယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး )..
Intel® Core™ i7-8700K Processor ဒီကောင်ကတော့ official unlock cpu ပါ။ Processor Base Frequency က 3.70 GHz ကနေစပြီးတော့ Max Turbo Frequency ကတော့ 4.70 GHz အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။ သူကတော့ unlock version ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင် ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ cpu + mobo ဆိုရင် .........
Core i7-7700K + asus z170k ပေ့ါ။
အခုအချိန်ထိ up to date ဂိမ်းအတော်များများကို ဆော့နိုင်တုန်းပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာ ၀ယ်တဲ့ အခါ ဒီ ကွန်ပျူတာ/လက်တော့ တစ်လုံးမှာ ဘာ cpu ဘာသုံးထားလဲသိရအောင် ဘယ်လို စစ်ဆေးကြမလဲ။ (My computer > properties ကနေ ကြည့်မယ်လို့မပြောကြေး ငိငိ ၊ အဲကနေ ကြည့်တာက အသေးစိတ်မသိရပါဘူး)
software နဲ့ သုံးပြီး စစ်မယ်ဆိုရင်တော့
ကို အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ software တင်ဖို့ ခွင့်မပြုတဲ့အခါမျိုးမှာရော ဘယ်လို စစ်ဆေး ကြမလဲ ..
ဆိုင်တိုင်းကတော့ ကွန်ပျူတာကို power ဖွင့်ပေးပြီး ကြည့် ခွင့်ပေးပါတယ်။ Power ဖွင့်ပြီး window တက်လာတာနဲ့ ..... ကီးဘုတ်ကနေ window logo key + R လေးကို နှိပ်ပြီး dxdiag လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ။ DirectX Diagnostic Tool လေး ပေါ်လာပါမယ်။ System tab အောက်က processor
ကှနျပြူတာဝယျတဲ့အခါ အဓိက ကွညျ့ကွတာက CPU, RAM, Graphic နဲ့ Storage ပါပဲ.. ကြှနျတျောတို့ ခုလကျရှိအသုံးမြားနတောက Desktop PC မှာရော Laptop မှာပါ Intel ရဲ့ CPU တှပေါ.. အဲဒီထဲက i-Series တှဟော အသုံးအမြားဆုံးပါပဲ.. ကှနျပြူတာ CPU ကိုသာကွညျ့ကွတာ CPU တှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုတော့ တျောတျောမြားမြား မသိကွပါဘူး.. CPU တှထေဲက Intel ရဲ့ i-Series CPU တှမှောပါတဲ့ အက်ခရာအကွောငျး ဖတျမိသလောကျ ပွနျလညျ မြှဝပေါမယျ..
Desktop CPU ကတှကျကတော့ အထှအေထူး မရှိပါဘူး။ K ပါတာနဲ့ မပါတာ ဒီ ၂ နှဈခုဘဲ ရှိပါမယျ။ ရိုးရိုးက official default core clock နဲ့ K ပါရငျတော့ unlock core clock ပေ့ါ။ ဥပမာ Intel® Core™ i7-8700 Processor ဒါဆိုရငျ i7 ပေ့ါ ၊ 8700 လို့ ရေးထားတဲ့အတှကျ generation က 8th gen ပေ့ါ။ ဒီကောငျမှာဆိုရငျ Processor Base Frequency က 3.20 GHz ကနစေပွီးတော့ Max Turbo Frequency
ကတော့ 4.60 GHz အထိ သုံးနိုငျပါတယျ။ ( Max လို့ရေး ထားပမေယျ့လညျး Unlock မဟုတျတဲ့အတှကျ အပွညျ့အဝ သုံးနိုငျမယျလို့ မပွောနိုငျပါဘူး )..
Intel® Core™ i7-8700K Processor ဒီကောငျကတော့ official unlock cpu ပါ။ Processor Base Frequency က 3.70 GHz ကနစေပွီးတော့ Max Turbo Frequency ကတော့ 4.70 GHz အထိ သုံးနိုငျပါတယျ။ သူကတော့ unlock version ဖွဈတဲ့အတှကျ အပွညျ့အဝ အသုံးခနြိုငျ ပါတယျ။
ဥပမာအနနေဲ့ လိုကျဖကျညီတဲ့ cpu + mobo ဆိုရငျ .........
Core i7-7700K + asus z170k ပေ့ါ။
အခုအခြိနျထိ up to date ဂိမျးအတျောမြားမြားကို ဆော့နိုငျတုနျးပါဘဲ။ ဒါဆိုရငျ ကနြျောတို့ ကှနျပြူတာ ၀ယျတဲ့ အခါ ဒီ ကှနျပြူတာ/လကျတော့ တဈလုံးမှာ ဘာ cpu ဘာသုံးထားလဲသိရအောငျ ဘယျလို စဈဆေးကွမလဲ။ (My computer > properties ကနေ ကွညျ့မယျလို့မပွောကွေး ငိငိ ၊ အဲကနေ ကွညျ့တာက အသေးစိတျမသိရပါဘူး)
software နဲ့ သုံးပွီး စဈမယျဆိုရငျတော့
ကို အသုံးပွုပွီး စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ ဆိုပါစို့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ software တငျဖို့ ခှငျ့မပွုတဲ့အခါမြိုးမှာရော ဘယျလို စဈဆေး ကွမလဲ ..
ဆိုငျတိုငျးကတော့ ကှနျပြူတာကို power ဖှငျ့ပေးပွီး ကွညျ့ ခှငျ့ပေးပါတယျ။ Power ဖှငျ့ပွီး window တကျလာတာနဲ့ ..... ကီးဘုတျကနေ window logo key + R လေးကို နှိပျပွီး dxdiag လို့ ရိုကျပွီး enter ခေါကျလိုကျပါ။ DirectX Diagnostic Tool လေး ပျေါလာပါမယျ။ System tab အောကျက processor
နရောမှာ အသေးစိတျ ဖျေါပွထားပါတယျ။ Display Tab အောကျမှာ တော့ Graphic နဲ့ ပတျသကျတာ တှေ ရေးပေးထားပါတယျ။
Computer Knowledge, Knowledge, Tech News
Computer Knowledge Knowledge Tech News